बढी भाडा लिने कुन कुन गाडी कारवाहीमा परे, भाडाबारे सोध्दा यात्रु बोल्दै बोलेनन्
काठमाडौँ । बडा दशैँमा घर जाने यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने १५ सार्वजनिक यातायातलाई थानकोटमा कारवाही गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । थानकोट नाका हुँदै विभिन्न स्थानमा जाने सवारीको चलानीमा उल्लेख..
दशैं मनाउन रारा जानेको संख्या बढ्यो
काठमाडौं । लामो छुट्टीमा घुम्न जाने संस्कृति नेपालीहरुमा समेत बढ्न थालेको छ । दशैंमा हुने लामो विदामा धेरै व्यक्तिहरु बिभिन्न स्थानमा घुम्न निस्किन्छन् । पछिल्लो समय मुगुको रारा घुम्न गएर..
किन परेन लोकसेवाको १०१ विज्ञापनमा कुनै दरखास्त ?
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष मैनालीले गत आर्थिक वर्ष कूल पाँच हजार ९७० पदका लागि एक हजार २०४ र..
३० लाखमा स्थानीय तहले सुरु गरे रोजगारीका कार्यक्रम, के विदेशिने युवा घट्लान् ?
रोल्पा । युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम दिनानुदिन बढ्न थालेपछि रोल्पाका स्थानीय सरकारले गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको थालनी गरेका छन् । गाउँ युवाबिहीन हुँदा विकास गतिविधिमा..
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले बिभिन्न पदका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिनेहरुको संख्या १० वर्षको अवधिमा ६ गुणाले बढेको छ । सबैभन्दा बढी आवेदन प्रदेश २ बाट परेको छ भने..
संसारकै सबैभन्दा लामो हवाई उडान आजदेखि
एजेन्सी । संसारकै सबैभन्दा लामो हवाई उडान बिहिबारदेखि सुरू भएको छ। सिंगापुर एयरलाइन्सले सिंगापुरदेखि न्युयोर्कसम्मको १९ घन्टा लामो उडान सुरू गरेको हो। सिंगापुरबाट उडेको विमान १५ हजार किलोमिटर दूरी पार गरेर..
सिद्धार्थ बैंक र कैलाश विकास बैंकमा जागिर खुल्यो
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले मार्केटिङ÷सेल्स अफिसर तथा जुनियर अफिसर मागेको छ । आवश्यक संख्या तोकिएको छैन । सिद्धार्थको अफिसरमा जागिर खान चाहनेको ३ बर्षको अनुभव र कम्तिमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेको..
ज्योति विकास बैंकले माग्यो ४० जना कर्मचारी
काठमाडौं। ज्योति विकास बैंकले विभिन्न शाखा कार्यालयहरुको लागि २० जना शाखा प्रबन्धक माग गरेको छ। सहायक तथा जुनियर अफिसर तहमा २० जना रिलेसनसिप म्यानेजर तथा अप्रेसन इनचार्ज माग गरेको हो। बैंकले..
पारदर्शी छैन निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब-सुविधा, अब कति हुने ?
काठमाडौं । निजी विद्यालयले मागे जति शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य छन् । तर, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकले उचित तलब नपाएको गुनासोको अन्त्य भएको छैन। सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा राम्रो..
मेगा बैंकमा ११४ जना कर्मचारी माग, अधिकृतदेखि सहायक स्तरसम्ममा अवसर
काठमाडौं। मेगा बैंकले एकै पटक प्रधान कार्यालयदेखि नयाँ शाखा कार्यालयहरुसम्मका लागि ११४ जना कर्मचारी माग गरेको छ। बैंकले कर्पोरेट अफिस र विरगञ्जमा गरेर तीन जना म्यानेजर तहका कर्मचारी माग गरेको..
नाफा मात्रै खोज्ने निजी एयरलाइन्सलाई उडानमा रोक
हुम्ला । नेपालगञ्ज–सुर्खेतबाट हुम्लाको लागि उडान भर्दै आएका विभिन्न निजी एयरलाइन्सले केही दिनदेखि आफ्नो फाइदालाई लक्षित गर्दै जिल्लामा कम उडान भरेर पूर्वमा उडान भर्न शुरु गरेका छन् । एयरलाइन्सको व्यापारिक स्वार्थका..
सशस्त्र प्रहरीले माग्यो ४३ इन्स्पेक्टर र २३९ सर्इ
काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरीले नयाँ भर्नाको लागि विज्ञापन खुला गरेको छ। प्रहरीले ४३ जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र दुई सय ३९ जना सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि विज्ञापन खुला गरेको हो। योग्यता..
नेपाल बैंकको अन्तिम नतिजा आयो, को कसको नाम निस्कियो? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको गत साउन ५ गते भएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ । को कसको नाम निस्कियो ? थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् । ..
उहिलेको पोखरा: गाडी चल्नुभन्दा १५ वर्षअघि नै गरेको थियो विमान अवतरण
पोखरा । इतिहास खोतल्दा विक्रम संवत्को १५ औँं शताब्दीतिर कास्कीकोटका राजा कुलमण्डन शाहले पोखरा उपत्यकाका ठाउँठाउँमा गाई पालेका थिए । गाई पाले पनि आंँैलोको डरका कारण गोठाला बेँसीमा बस्दैनथे । गाई..
वैदेशिक रोजगारीका सम्पूर्ण सूचना अब मोबाइलमा, यसरी हेर्नुहोस
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायका सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सोमवारदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रणालीमा अध्यागमन विभाग,..
प्रहरीमा जागिर खाने हो ? एकैपटक ७ हजार पदपूर्ति हुँदै, अाठ कक्षा पासले पनि आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौँः नेपाल प्रहरीले एकै पटक सात हजार २७६ जनशक्ति पदपूर्तिकालागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ), जवान र सहयोगी गरी ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्न लागेको..
सामान्य शैक्षिक योग्यता भएका लाखौं बेरोजगारलाई काम दिने क्षेत्र भेटिएको श्रममन्त्री विष्टको दावी
काठमाडौं । देशको बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्न आफू विशेष योजनासहित अघि बढिरहेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जानकारी गराएका छन् । अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको..
शाश्वत धामलाई बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन अवार्ड
काठमाडौँ । शाश्वतधामले ‘बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन अफ नेपाल’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । विश्व पर्यटन दिवस २०७५ को अवसरमा सँस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयद्वारा आयोजित समारोहमा सोही मन्त्रालयका मन्त्री..
नागरिक लगानी कोषका लागि कार्यकारी निर्देशक खोज्दै अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खुला प्रतिष्पर्धाबाट नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक पदमा दरखास्तका लागि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकका..
असोज ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने शिक्षक सेवाको परीक्षा तयारी पूरा
काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगले यही असोज ११ गतेदेखि सञ्चालन हुन थालेको शिक्षकको परीक्षाको तयारी पूरा गरेको छ । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा तुलसी थपलियाले परीक्षा सञ्चालनको सबै काम सकिएकाले..
चार कम्पनीमा जागिरको अवसर, सानिमा, मुक्तिनाथ, कैलाश र सगरमाथा इन्स्योरेन्समा माग
काठमाडौं। सानिमा बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्षेत्रिय प्रमुखदेखि अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग गरेका छन्। सानिमा बैंकले फाइनान्स एण्ड प्लानिङको डेपुटी हेड माग गरेको छ।..
यती एयरलाइन्सले भित्रायो ट्वीन इञ्जिन टर्बोप्रप विमान
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले मंगलबार एटीआर-७२-५०० जहाज भित्राएको छ । जसको नेपाली दर्ता नम्बर ९एन(एएलएन र उत्पादन क्रम संख्या एमएसएन ७७६ रहेको छ । उक्त विमान फ्रान्सको टुलुस(इटली(इजिप्ट(मस्कट हुँदै काठमाण्डौंस्थित..
साउदी अरब काम गर्न जाने नेपालीको तलव बढ्यो, अब कम्तिमा १३ सय रियाल
काठमाडौं। साउदी अरबमा काम गर्न जाने कामदारका लागि ६ वर्षपछि न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रस्तावलाई गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्विकृत गरेको..
तीन लघुवित्तमा जागिर खुल्यो, साना किसान, विजय र जनसेवी लघुवित्तले मागे अधिकृतदेखि सहायकसम्मका कर्मचारी
काठमाडौं। साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अधिकृत स्तरदेखि सहायक स्तरसम्मका कर्मचारी माग गरेका छन्। साना किसानले ११ जना कर्मचारी माग गरेको छ।..
तीन वित्तीय संस्थामा जागिरको अवसर, अनुभव भएकालार्इ शाखा प्रमुख नभएकालार्इ प्रशिक्षार्थी
काठमाडौं। मञ्जुश्री फाइनान्स, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था र वमी लघुवित्तले नयाँ शाखा कार्यालयको लागि शाखा प्रमुखदेखि प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको माग गरेका छन्। लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक जना विजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर, ४..
सशस्त्र प्रहरीले माग्यो २०४० सशस्त्र प्रहरी, ८ कक्षा पासले पनि आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एकै पटक २०४० जना प्रहरी माग गरेको छ। सशस्त्रले १९३६ जना प्रहरी जवान माग गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरी परिचर अन्तर्गत ७४ जना भान्से, ८..
काठमाडौं । नेपाली सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट (अधिकृत क्याडेट) पदमा भर्ना खुलेको छ। सेनाले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो। उक्त पदमा २०० जनाको दरखास्त आह्वान गरिएको छ। पछिल्ला केही..
महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्सले सहायक कार्यकारी देखी फिल्ड सहायकसम्म ३५ कर्मचारीको माग, प्लस टु उर्तिणले पनि आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं । महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्सले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय, विभिन्न विभाग तथा निकट भविष्यमा खोलिने शाखा कार्यालयका लागि सहायक कार्यकारी प्रमुख १ जना, बरिष्ठ प्रबन्धक १ जना, विभागिय प्रमुख केही, कनिष्ठ..
माछापुच्छ्रे बैंकले माग्यो १०१ जना कर्मचारी, ट्रेनीदेखि अधिकृत स्तरसम्म
काठमाडौं। माछापुच्छ्रे बैंकले नयाँ शाखाका लागि १०१ जना कर्मचारी माग गरेको छ। बैंकले उपत्यकाभित्र तथा बाहिर गरेर ६ वटा शाखा कार्यालयहरुमा शाखा प्रमुख माग गरेको हो। सहायक स्तरको अधिकृत तहमा ७..
सहयोगी विकास बैंकमा महाप्रबन्धक र सहायक स्तरका कर्मचारी माग, प्लस टु गरेकाले पनि पाउने
काठमाडौं। सहयोगी विकास बैंकले नायव महाप्रबन्धकदेखि जुनियर सहायक सम्मका पदमा ३३ जना कर्मचारी माग गरेको छ। तीन जिल्ला धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुली जिल्लामा कार्य क्षेत्र रहेको बैंकले दुर्इ जना नायव..
Results 845: You are at page 13 of 29